ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်: Martech Zone
ဒါဟာဂျွန် Uhri သို့ကြီးစွာသောဝင်တိုက်ခဲ့သည် Red Bit အပြာရောင် bit at Indiana Blog, ဒီနှစ်။ John သည်ဆွေးနွေးမှုများ၌ပုံမှန်မှတ်စုများရေးသားခြင်းထက်သူသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်သည် infographic).
ဒီတော့ဒီမှာ infographic ကောင်းတစ်ခုပါ Dummies အတွက်ကော်ပိုရိတ် Blogging သူသည်စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးနောက် (အရွယ်အစားအပြည့်အစုံကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကိုနှိပ်ပါ) ဖတ်ပြီးနောက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် John! ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အဓိကအကြောင်းအရာများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များသည်မည်သူမဆိုစတင်လုပ်ကိုင်မည့်သူအတွက်သေချာပေါက်နှိုင်းယှဉ်သောကြောင့်ဤကဲ့သို့သောအမြင်အာရုံကိုတွေ့ရခြင်းသည်အလွန်ဝမ်းသာပါသည်။ ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်!
31:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 7, 01
ဒီလိုမျိုး infographic လုပ်ခြင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးကတော့ပုံမှန်မှတ်စုတွေရေးတာထက်ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာခေါင်းစဉ်ကိုပိုခိုင်မာစေတယ်။ ငါဘလော့ဂ်ပို့တ်ရေးနေစဉ်၊ ငါက sidehow talker ပုံကိုစဉ်းစားပြီးလှုပ်ရှားမှုအတွက်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုထည့်ရန်သတိရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အက္ခရာစာလုံးအသေးများအလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။